Nke mbụ 100% ụgbọelu ndị agha Africa - Afrikhepri Fondation
Lo buru ụzọ banye ụgbọelu Africa zuru oke zuru ezu na August 13 na South Africa. A ga-eji ụdị ụdị ndị agha a na-enyocha ikuku wee na-ere ihe ruru nde $ 10. Na August 13, 2014 na elekere asaa nke ụtụtụ, ụgbọelu Africa 7% mbụ wepụrụ na tarmac na Pretoria Wonderboom Airport. Obere ụgbọ elu a, akpọrọ AHRLAC (ụgbọ elu dị elu na-enwupụta ụgbọ elu) nwere atụmatụ na-eyi egwu nke yiri nnukwu ahụhụ ma nwee ike iburu onye ọkwọ ụgbọ elu yana onye njem. A raara ụdị ndị agha na-anya ụgbọelu na ikpuchi ikuku.
Ọ ga - enwe ike mepụta mgbasa ozi nke mgbochi na njikwa nke ihe okike, gburugburu ebe obibi, njikwa ókèala, nchekwa n'ime ụlọ, mmiri mmiri, ọgụgụ isi. A ga-ebu ụzọ mata ụzọ izizi maka ịrụ ọrụ ụgbọ elu, tupu etinye ya na ngwa agha nke aga-elele ya.
Ọ dịghị ihe na-erughị ndị 60 Africa engineer nọ na-arụ ọrụ na nhazi na rụpụta ya kemgbe 2011.
Ihe oru ngo 100 South Afrika
Ezubere ụgbọelu a kpamkpam, zụlite ma chịkọta ya na South Africa, mkpụrụ nke mmekorita n'etiti Paramount, otu ọgbakọ nchekwa mbụ nke mba egwurugwu, na Aerosud, onye na-ahụ maka ikuku na mpaghara. Ihe na-erughị ndị injinia Africa 60 arụwo ọrụ na nhazi ya na imepụta ya kemgbe 2011, ụbọchị mmalite nke ọrụ ahụ, na nkezi afọ ndị otu oru ngo a dị naanị afọ 32.
Designmepụta akụkụ ahụ bụ nke dijitalụ kpamkpam, yana mkpa ọ dị ịbụ ndị ezukọta na-enweghị ịgbado ọkụ, dị ka egwuregwu mebere ụgbọ elu, naanị n'ime awa ole na ole. Ejiri Paramount dị na South Africa rụzie ma rụọ ya, ka o nwee ike imepụta nchara na akụkụ akụkụ ụgbọ elu ahụ ngwa ngwa o kwere mee.
Ọnụ ego otu euro dị nde Euro iri
Mmepe nke AHRLAC kwesịrị ime ka ụlọ ọrụ South Africa nweta ego ruru nde $ 200, na ọnụ ahịa oresịrị dị ihe dị ka nde dọla 10 kwa otu. Dabere na Paramount, ụgbọ elu ahụ nwere mmasị n'ọtụtụ mba ndị so na NATO na mba ndị na-apụta, tumadi n'ihi ọnụ ala dị ala karịa usoro nyiwe ikuku.
Ndị na-emepụta oji na ndị sayensị: mbipụta nke atọ
23,99€ dị na ngwaahịa
1 ọhụrụ site na 23,99 €
Zụta € 23,99
ka Ọgọst 7, 2020 5:37
Ụbọchị mwepụta 2018-10-09T00:00:00.000Z
Publication Ụbọchị 2018-10-05T00:00:00.000Z
Ike nke ntụkwasị obi - Brian Tracy (Audio)
Ike nke ihe gi nile - Joseph Murphy (Audio)